လိုတဲ့အချိန်တိုင်း အသင့်ရှိနေစေဖို့ – Gentleman Magazine
သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားလုံးဟာ ကျားအင်္ဂါပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ အသက် ၅၀ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတစ်ဦးရဲ့ လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အသက် ၃၀ ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ဦးထက် ပိုပြီးမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
ကေားင်းမွန်တဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုဟာ ကျားအင်္ဂါတင်းမာဖို့အတွက် လိုအပ်ပြီး တခြား ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကလဲ အင်္ဂါရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ အလုပ်ကနေ စိတ်ဖိစီးမှုရလာတဲ့အခါ၊ အရက်သောက်လာတဲ့အခါ၊ အဝလွန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် သင့်အင်္ဂါဟာ အလုပ် လုပ်သင့်သလောက် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကံကောင်းစွာနဲ့ သင့်အင်္ဂါကို ကျန်းမာစေပြီး အသက် ၈၀ ကျော်ထိ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင့်အင်္ဂါကို ကျန်းမာအောင် ထားပါ။
အစားအသောက် ချင့်ချိန်စားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ဗိုက်ပါတ်လည်က အဆီတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်က အဆီတွေဟာ သင့်ရဲ့ လိင်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ တက်ထရိုစတီရုန်းဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဗိုက်ရွှဲတာဟာ လိင်ကျန်းမာရေးအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ သင့်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါရဲ့ သွေးကြောဟာ နှလုံးသွေးကြောထက် ပိုကျဉ်းတဲ့အတွက် နှနှလုံးသွေးကြောတစ်ခုခုဖြစ်ရင် သင့်အင်္ဂါမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှာပါ။
ဆေးလိပ်သောက်တာဟာ သွေးကြောတွေကို ကျဉ်းစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဟာ လိင်အင်္ဂါသွေးစီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်ပြီး တင်းမာမှု လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ မသောက်သူတွေထက် ပန်းသေးပန်းညှိုးရောဂါ ခံစားရနိုင်ဖို့ နှစ်ဆ ပိုများပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ သွေးစီးဆင်းမှု မြင့်တက်လာပြီး သွေးကြောနံရံတွေကနေ လိင်အင်္ဂါတင်းမာမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ် လုပ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ စိတ်ဖိအားကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
၄. ဘောတွေကို စစ်ဆေးပေးပါ
ဝှေးစေ့ကင်ဆာဟာ အသက် ၁၅ ကနေ ၄၀ အတွင်း လူပေါင်း ၈၀၀၀ နီးပါးမှာ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ စောစောသိရင် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ဖို့ ၉၅ ရာနှုန်း အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ မကုပဲ ထားခဲ့ရင်တော့ တခြားကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပျံသွားမှာပါ။ ဝှေးစေ့ကို စစ်ဆေးဖို့အတွက်
ရေပူပူ ချိုးလိုက်ပါ။ ရေပူဟာ သင့်ဝှေးစေ့ကို အိတ်ထဲဆွဲထားတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး သင့်အတွက် စစ်ဆေးရ လွယ်ကူစေပါတယ်။
ဝှေးစေ့တွေကို အုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။ တစ်လုံးချင်းစီကို စမ်းကြည့်ပါ။ တစ်ထပ်ထဲမကျနိုင်ပေမယ့် ဆိုဒ်အရမ်း ကွဲနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
တစ်လုံးချင်းစီကို လက်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ လက်ညှိုး လက်မ လက်ခလယ်တို့သုံးပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက် လှိမ့်ကြည့်ရင်း အဖုအပိမ့်တွေ ပါမပါ စမ်းကြည့်ပါ။ ဥတစ်လုံးစီဟာ ကြက်ဥပြုတ်နွှာပြီးသားလို ချောမွေ့နေစေရပါမယ်။ တစ်ခုခုတွေ့မိရင်လည်း အရမ်းမလန့်ပါနဲ့။ ဝှေးစေ့ တစ်လုံးချင်းစီနောက်မှာ အဖုနဲ့ မှားနိုင်တဲ့ပြွန်သေးသေးပျော့ပျော့လေး တစ်ခုစီပါပါတယ်။ စိတ်အေးအေးထားပြီး သေချာစမ်းကြည့်ပါ။ တခြား အဖုအပိမ့် တစ်ခုခုတွေ့ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ပါ။
တက်စတိုစတီရုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာ မနက်ပိုင်းမှာ အမြင့်မားဆုံးပါ။ အအိပ်နည်းခြင်းဟာ တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှု လျော့စေနိုင်ပြီး တခြားကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။
၆. ငါးများများ စားပါ
ငါးမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဟာ နှလုံးနဲ့ လိင်တံ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Large Blue Fish, striped bass နဲ့ Farmed Salmon တို့လို ငါးမျိုးတွေမှာ သုတ်ကောင်လျော့နည်းစေပြီး တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းစေတဲ့ အဆိပ်ဓာတ်တွေ ပါပါတယ်။
၇. အာဟာရ ဆေးတွေ မှီဝဲပါ
တစ်ပါတ်ကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် ငါးမစားဖြစ်ဖူးဆိုရင် အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ် ပါဝင်တဲ့ အားဆေး တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်သောက်ပေးပါ။
၈. အရက် နည်းနည်းသာ သောက်ပါ
ဝိုင်တစ်ခွက်လောက်ဟာ အထောက်အကူပြုပေမယ့် တစ်ပုလင်းလုံးဆိုရင်တော့ သင့်အင်္ဂါ စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကို အခက်အခဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်တွေအရ အရက်ဟာ နည်းနည်းသောက်ရင် လိင်ဆက်ဆံတုန်း စိတ်ဖိစီးမှုလျော့သွားစေပေမယ့် များများဆိုရင် ပြောင်းပြန် အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ အရက်များများကို ရေရှည်စွဲသောက်ရင် ဦးနှောက်နဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲသွားစေပြီး လိင်ကိစ္စကို အကျိုးဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းနဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ဝှေးစေ့တွေ ကျံဝင်သွားခြင်းနဲ့လဲ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၉. အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ကို လျော့ပြီး နေပါ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ လိင်အင်္ဂါတွေကို သွေးလျှောက်မှု လျော့နည်းစေပါတယ်။ အရမ်းကြီး စိတ်ဖိစီးနေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန် စိတ်ဖိစီးတာဖြစ်တဲ့ အဆက်ဆံရခက်တဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ၊ ရက်ချိန်းပြီးဖို့ ကြိုးစားရတာ၊ မမြတ်မှာ ကြောက်ရတာတွေဟာလဲ လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်၊ အစားအသောက် ချင့်ချိန်စားမှသာ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေမှာပါ။
သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနအေားလုံးဟာ ကြားအင်ျဂါပျေါမှာ အကြိုးသကျရောကျပါတယျ။ အသကျ ၅၀ ကနျြးမာရေးလိုကျစားသူတဈဦးရဲ့ လိငျစှမျးဆောငျရညျဟာ အသကျ ၃၀ ဆေးလိပျသောကျသူတဈဦးထကျ ပိုပွီးမွငျ့မားနိုငျပါတယျ။
ကေားငျးမှနျတဲ့ သှေးစီးဆငျးမှုဟာ ကြားအင်ျဂါတငျးမာဖို့အတှကျ လိုအပျပွီး တခွား ရုပျပိုငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အခွအေနတှေကေလဲ အင်ျဂါရဲ့ လုပျဆောငျနိုငျမှုကို အကြိုးသကျရောကျပါတယျ။ အလုပျကနေ စိတျဖိစီးမှုရလာတဲ့အခါ၊ အရကျသောကျလာတဲ့အခါ၊ အဝလှနျနတေဲ့အခါမြိုးမှာဆိုရငျ သငျ့အင်ျဂါဟာ အလုပျ လုပျသငျ့သလောကျ လုပျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ကံကောငျးစှာနဲ့ သငျ့အင်ျဂါကို ကနျြးမာစပွေီး အသကျ ၈၀ ကြျောထိ ကောငျးမှနျစှာ ဆကျဆံနိုငျဖို့ နညျးလမျးရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သငျ့အင်ျဂါကို ကနျြးမာအောငျ ထားပါ။
အစားအသောကျ ခငျြ့ခြိနျစားပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးဖွငျ့ ဗိုကျပါတျလညျက အဆီတှကေို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ ဗိုကျက အဆီတှဟော သငျ့ရဲ့ လိငျကနျြးမာရေးအတှကျ လိုအပျတဲ့ တကျထရိုစတီရုနျးဟျောမုနျး ထှကျရှိမှုကို အနှောကျအယှကျ ဖွဈစပေါတယျ။ ဗိုကျရှဲတာဟာ လိငျကနျြးမာရေးအပါအဝငျ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးအတှကျ မကောငျးပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ လိငျအင်ျဂါရဲ့ သှေးကွောဟာ နှလုံးသှေးကွောထကျ ပိုကဉျြးတဲ့အတှကျ နှနှလုံးသှေးကွောတဈခုခုဖွဈရငျ သငျ့အင်ျဂါမှာ အကြိုးသကျရောကျမှာပါ။
ဆေးလိပျသောကျတာဟာ သှေးကွောတှကေို ကဉျြးစပေါတယျ။ ဆေးလိပျမှာပါတဲ့ နီကိုတငျးဟာ လိငျအင်ျဂါသှေးစီးဆငျးမှုကို ထိခိုကျပွီး တငျးမာမှု လြော့နညျးစပေါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျသူတှဟော မသောကျသူတှထေကျ ပနျးသေးပနျးညှိုးရောဂါ ခံစားရနိုငျဖို့ နှဈဆ ပိုမြားပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါ သှေးစီးဆငျးမှု မွငျ့တကျလာပွီး သှေးကွောနံရံတှကေနေ လိငျအင်ျဂါတငျးမာမှုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ နိုကျထရဈအောကျဆိုဒျဓာတျ လုပျလှတျပေးပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော စိတျဖိအားကိုလညျး လြော့နညျးစပေါတယျ။
၄. ဘောတှကေို စဈဆေးပေးပါ
ဝှေးစကေ့ငျဆာဟာ အသကျ ၁၅ ကနေ ၄၀ အတှငျး လူပေါငျး ၈၀၀၀ နီးပါးမှာ နှဈစဉျ ဖွဈပှားနပေါတယျ။ စောစောသိရငျ ပြောကျကငျးအောငျ ကုသနိုငျဖို့ ၉၅ ရာနှုနျး အခှငျ့အလမျးရှိပါတယျ။ မကုပဲ ထားခဲ့ရငျတော့ တခွားကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို ပြံသှားမှာပါ။ ဝှေးစကေို့ စဈဆေးဖို့အတှကျ
ရပေူပူ ခြိုးလိုကျပါ။ ရပေူဟာ သငျ့ဝှေးစကေို့ အိတျထဲဆှဲထားတဲ့ ကွှကျသားတှကေို ပွလြေော့စပွေီး သငျ့အတှကျ စဈဆေးရ လှယျကူစပေါတယျ။
ဝှေးစတှေ့ကေို အုပျကိုငျလိုကျပါ။ တဈလုံးခငျြးစီကို စမျးကွညျ့ပါ။ တဈထပျထဲမကနြိုငျပမေယျ့ ဆိုဒျအရမျး ကှဲနတော မဖွဈသငျ့ပါဘူး။
တဈလုံးခငျြးစီကို လကျနဲ့စမျးသပျကွညျ့ပါ။ လကျညှိုး လကျမ လကျခလယျတို့သုံးပွီး စက်ကနျ့သုံးဆယျလောကျ လှိမျ့ကွညျ့ရငျး အဖုအပိမျ့တှေ ပါမပါ စမျးကွညျ့ပါ။ ဥတဈလုံးစီဟာ ကွကျဥပွုတျနှာပွီးသားလို ခြောမှနေ့စေရေပါမယျ။ တဈခုခုတှမေိ့ရငျလညျး အရမျးမလနျ့ပါနဲ့။ ဝှေးစေ့ တဈလုံးခငျြးစီနောကျမှာ အဖုနဲ့ မှားနိုငျတဲ့ပွှနျသေးသေးပြော့ပြော့လေး တဈခုစီပါပါတယျ။ စိတျအေးအေးထားပွီး သခြောစမျးကွညျ့ပါ။ တခွား အဖုအပိမျ့ တဈခုခုတှရေ့ငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွကွညျ့ပါ။
တကျစတိုစတီရုနျးထုတျလုပျမှုဟာ မနကျပိုငျးမှာ အမွငျ့မားဆုံးပါ။ အအိပျနညျးခွငျးဟာ တကျစတိုစတီရုနျး ထုတျလုပျမှု လြော့စနေိုငျပွီး တခွားကနျြးမာရေးထိခိုကျမှုတှလေဲ ဖွဈစပေါတယျ။
၆. ငါးမြားမြား စားပါ
ငါးမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတျတှဟော နှလုံးနဲ့ လိငျတံ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Large Blue Fish, striped bass နဲ့ Farmed Salmon တို့လို ငါးမြိုးတှမှော သုတျကောငျလြော့နညျးစပွေီး တကျစတိုစတီရုနျး ထုတျလုပျမှု ကဆြငျးစတေဲ့ အဆိပျဓာတျတှေ ပါပါတယျ။
၇. အာဟာရ ဆေးတှေ မှီဝဲပါ
တဈပါတျကို နှဈကွိမျ သုံးကွိမျလောကျ ငါးမစားဖွဈဖူးဆိုရငျ အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျဆဈ ပါဝငျတဲ့ အားဆေး တဈနကေို့ နှဈကွိမျသောကျပေးပါ။
၈. အရကျ နညျးနညျးသာ သောကျပါ
ဝိုငျတဈခှကျလောကျဟာ အထောကျအကူပွုပမေယျ့ တဈပုလငျးလုံးဆိုရငျတော့ သငျ့အင်ျဂါ စှမျးဆောငျနိုငျဖို့ကို အခကျအခဲ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ စမျးသပျခကျြတှအေရ အရကျဟာ နညျးနညျးသောကျရငျ လိငျဆကျဆံတုနျး စိတျဖိစီးမှုလြော့သှားစပေမေယျ့ မြားမြားဆိုရငျ ပွောငျးပွနျ အကြိုးသကျရောကျပါတယျ။ အရကျမြားမြားကို ရရှေညျစှဲသောကျရငျ ဦးနှောကျနဲ့ ဟျောမုနျးထုတျလုပျပုံတှကေို ပွောငျးလဲသှားစပွေီး လိငျကိစ်စကို အကြိုးဆုတျယုတျစပေါတယျ။ အရကျသောကျခွငျးနဲ့ လိငျအင်ျဂါနဲ့ ဝှေးစတှေ့ေ ကြံဝငျသှားခွငျးနဲ့လဲ ဆကျစပျနပေါတယျ။
၉. အေးအေးဆေးဆေး စိတျကို လြော့ပွီး နပေါ
စိတျဖိစီးမှုတှဟော လိငျအင်ျဂါတှကေို သှေးလြှောကျမှု လြော့နညျးစပေါတယျ။ အရမျးကွီး စိတျဖိစီးနမှေ မဟုတျပါဘူး။ ပုံမှနျ စိတျဖိစီးတာဖွဈတဲ့ အဆကျဆံရခကျတဲ့ အလုပျရှငျနဲ့ အလုပျလုပျရတာ၊ ရကျခြိနျးပွီးဖို့ ကွိုးစားရတာ၊ မမွတျမှာ ကွောကျရတာတှဟောလဲ လိငျစှမျးဆောငျရညျကို လြော့ကစြပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ၊ အိပျရေးဝအောငျအိပျ၊ အစားအသောကျ ခငျြ့ခြိနျစားမှသာ စိတျဖိစီးမှု လြော့နညျးစမှောပါ။
Previous: ခန္ဓာကိုယ် ဘေးသားအဆီတွေ လျော့ချဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
Next: ဘ၀မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အောင်မြင်စေနိုင်မည့် အမူအကျင့်များ